Tichitarisa kuAfrican Tourism Board nenhengo dziri munyika makumi maviri nenomwe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Tichitarisa kuAfrican Tourism Board nenhengo dziri munyika makumi maviri nenomwe
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Nhau dzeBurundi • Bhizinesi Kufamba • Cameroon Breaking News • Chad Kupwanya Nhau • Comoros Breaking Nhau • Congo Breaking News • Cote d'Ivoire Kupwanya Nhau • Djibouti Breaking Nhau • DR Congo Kuputsa Nhau • Egypt Kudzokorora Nhau • Eritrea Kupwanya Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • Gabon Breaking Nhau • Gambia Kupwanya Nhau • Ghana Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Kenya Kupwanya Nhau • Lesotho Breaking News • LGBTQ • Liberia Kupwanya Nhau • Libya Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • Mali Breaking News • Mauritius Breaking Nhau • Niger Breaking Nhau • Nigeria Breaking News • vanhu • Senegal Breaking News • Seychelles Kuputsa Nhau • Sierra Leone Breaking News • Somalia Kuvhuna Nhau • South Africa Breaking News • South Sudan Kuputsa Nhau • Sudan Kupwanya Nhau • Togo Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Tunisia Kupwanya Nhau • Uganda Breaking News • Zambia Breaking News • Zimbabwe Breaking News
The African Tourism Bhodhi mubatanidzwa weveruzhinji-wakasarudzika neumwe meseji yakasimba. Iyi meseji ndeyekuudza nyika kuti Africa Tourism iri kuita nzvimbo imwe uye yakavhurika bhizinesi. Africa inyika yakachengeteka uye inogamuchira vashanyi, mari, uye kudyidzana nemaoko maviri. Africa Tourism Board iri kutambirawo vatungamiriri vekushanya kubva kumatunhu akapoteredza Africa nepasi rese nemaoko maviri ekuunza hutungamiriri, hunyanzvi uye mikana yekudyara.
Vatungamiriri vezvekushanya vari kuona kuda uku kuti Africa ikure pamwe chete. Kusiya zvematongerwo enyika kumashure uye nekukwezva vatungamiriri vezvekushanya kuti vabatane neichi chikuva chitsva chekupedza kudzingirira African Tourism Board iri pamusoro pekuwedzera bhizinesi, kudyara mari uye kuzivisa kwakanaka kwekondinendi inokanganwika.
Semumwe wevatsigiri vekutanga uye nhengo yekutanga, IFREE Boka muHongKong ikambani yepasirese inopayona nzira nyowani dzekugara dzakabatana munyika yekufambisa uye nharembozha.
Kubva kune dzimwe nyika kufona uye mhinduro dzinofamba-famba kuWi-Fi yekubatanidza uye zvakasarudzika zvigadzirwa zvekufambisa, iFREE Boka rakamisikidza chinangwa chekuputsa zvipingamupinyi nekuunza nyika padhuze pamwechete, uye Africa iri pachokwadi pazano ravo.
Ichangoumbwa African Tourism Bhodhi inoenderana nechazvino chiitiko chakaiswa ne International Mubatanidzwa weVashanyi Partner (ICTP)
Kufamba midhiya inoda Africa uye inoratidza. Mumwedzi mumwe mutori venhau uye zvinyorwa kubva kumativi ese epasi zvakave shamwari dzevezvenhau kutsigira African Tourism Board.
Iyo African Tourism Board ingori nemwedzi mupfupi uye yaive yaisa kufona kunhengo dzekutanga. Iyo hurukuro inoshingaira iri kuitika. Chete nhasi African Tourism Board yatogamuchira zana nhengo nyowani uye vamwe vazhinji vane shungu dzekuve mapiyona musangano iri reAfrica, nevaAfrica nerutsigiro rwenyika.
Sangano rinopa kurwira kwakabatana, kutsvagisa zvine hungwaru, uye zviitiko zvehunyanzvi kunhengo dzayo.
Mukubatana nenhengo dzakazvimirira uye dzehurumende, African Tourism Board (ATB) inosimudzira kukura kwakasimba, kukosha, uye mhando yekufamba uye kushanya kune-kubva-uye-mukati Africa.
Sangano rinopa hutungamiriri nemazano pamunhu uye mubatanidzwa kumasangano enhengo
Sangano iri riri kuwedzera pamikana yekushambadzira, kudyidzana neruzhinji, kudyara mari, kushambadzira, kusimudzira nekusimbisa misika.
The ATB Tourism kuchengetedzeka uye hutano summit muSierra Leone uye yakaronga kune dzimwe nyika nhatu.
PR & Kushambadzira, Midhiya kusvika
Trade show kutora chikamu
USA Road inoratidza
Nhengo parizvino dzakanyoreswa munyika dzinotevera:
Kongo (Rep of the)
ATB iri munzira yekuzivisa bhodhi rekutanga reVakuru veVashanyi vemuAfrica uye iri munzira yekubatanidza zviitiko zviri kuenderera mberi nevamwe veAfrican Tourism vanobatirana pasi padenga rimwe.
Kutsvaga kwemukuru mukuru wekambani kwakatotanga uye kutumidza mazita ekushanyirwa kwevakakurumbira vari kupindura.
Sangano rakatouya kure kure kubva chiziviso chekutanga rakabudiswa na eTurboNews musi waApril 6, 2018.
Kutsvaga kweAfrican Tourism Board ekutanga nhengo kuchiripo.
Kubatana neATB kuri nyore. Ingoshanya www.africantourismism.com uye tinya pa Joinha isu se member.
Jamaica Inokurudzira Vafambi: Tevera Kuzvivhara kune ...
Vaimbove Secretary of State weAmerica Colin Powell anofa ...
African Tourism Board Sachigaro Anoparadzira Meseji yeTariro ku ...
Kushanda semuranda kwemakore makumi maviri? Wadzingwa basa!